Nin Hubeysan Oo Xoog Ku Galay Xaafad Uu Deggan yahay Ra’iisalwasaaraha Canada | Gaaroodi News
Nin Hubeysan Oo Xoog Ku Galay Xaafad Uu Deggan yahay Ra’iisalwasaaraha Canada
July 3, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Nin hubaysan oo ka tirsanmilatariga dalka Canada ayaa la qabtay ka dib markii sida uu boolisku sheegay uu xoog ku galay albaabka xaafad uu deggan yahay ra’iisalwasaaraha dalkaasi Justin Trudeau.
Ninkaasi ayaa xalay gaari jiirsiiyay albaabka weyn ee laga soo galo Rideau Hall oo ah halka uu magaalada Ottawa ka deggan yahay ra’iisalwasaare Trudeau, ka hor inta aysan boolisku qaban.
Ninkaasi ayaa haatan la sheegayaa in uu baaritaaan ku socdo isla markaana dacwad lagu soo oogi doono.
Ra’iisalwasaaraha dalkaasi, Justin Trudeau iyo xubnaha kale ee qoyskiisa oo hadda deggan xaafaddaasi Rideau Hall ee ninka hubeysan uu xoogga ku soo galay ayaa ka maqnaa gurigooda.
Qoyska ra’iisalwasaaraha ayaa si ku meel-gaar ah u deggan xaafaddani maadaama haatan uu dayactir ku socdo gurigiisa rasmiga ah.
Booliska ayaa sheegay in ninkaasi hubeysan uu ka tirsan yahay milatariga dalkaasi isla markaana sida ugu dhakhsaha badan ay u shaacin doonaan magaciisa.
Waxa uu boolisku intaa ku daray in baaritaannada dhacdadasi ay iska kaashan doonaan iyaga iyo milatariga, isla markaana arrintaasi si weyn loo baari doono.
Sawirro laga soo qaaday albaabka kore ee laga soo galo xaafaddaasi ayaa muujinaya burbur xooggan soo gaaray ganjeelka laga soo galo xaafaddaasi, taasi oo ninkani uu ku dhuftay gaari uu watay, kaa oo isna ay boolisku sheegeen in uu burburay.
Gariga uu ninkani ku dhuftay ganjeelka ayaa markii dambe waxaana loogu yeeray ciidamada milatariga ee u tababaran furfuridda walxaha qarxa si ay walxaha qarxa uga raadiyaan gudaha gaarigaasi.
Warbaahinta qaar ee dalkaasi Canada ayaa sheegtay in ninkaasi uu ku hubeysnaa dhawr qori. Wararka qaar ayaa sheegaya in ninkaasi uu sheegay in uu doonayay in uu la hadlo ra’iisalwasaare Trudeau, isla markaana uu markii dambe boolisku isu soo dhiibay isaga oo aan dagaallamin.
Telefishinka CBC ee dalkaasi ayaa sheegay in ninkaasi uu ka yimid meel 1,900 kilomitir u jirta magaalada Ottawa.
Ra’iisalwasaare Trudeau ayaa dhawaan qaaday tallaabooyin uu ku xaddidayo in dadku ay iibsadaan noocyada qaar ee hubka, xilli dad badan oo dalkaasi deggan gaar ahaanna deegaannada miyiga ay aad u hubeysan yihiin.
Tallaabadaasi ayuu qaaday horraantii sanadkan ka dib markii gobolka Nova Scotia ee dalkaasi uu ka dhacay weerar toogasho ah oo dad badan ay ku dhinteen.
Afar arrimood Oo la Xidhiidha khilaafka Cusub ee Kenya iyo Soomaaliya